Idibana njani 'neglasi' kwi 'engenakuqhekeka' kunye 'nokwahlulahlula' - Iimuvi
Idibana njani 'neglasi' kwi 'engenakuqhekeka' kunye 'nokwahlulahlula'
Xa uM. Night Shyamalan watyhila umboniso wakhe wokuqala weqonga Ayinakuqhekeka Ngo-2000, indawo yaseHollywood yayingekazaliswa ngamabali amaqhawe neziyunivesithi zemovie. I-MCU yayingeyonto, kwaye ne-DC eyandisiweyo iyunivesi-nkqu i-DCEU's eyaziwayo eyandulelayo, uChristopher Nolan's Batman trilogy, ngekhe ithathe eminye iminyaka emihlanu. Yiyo loo nto uShimamalan wayenokubaleka ngokuvula Ayinakuqhekeka ngale nto:
Kubonakala kuhlekisa, ujonge oku ngo-2019, ukuvula ifilimu ngokwazisa abaphulaphuli bakho ukuba iiqhula zithandwa ngokwenene. Kodwa oku kwakubuyile ngo-2000, kwaye uShyamalan wayehamba ngolwandle-kwaye esebenza ngokuchasene-nendawo eyahluke ngokupheleleyo. Oku akunakucinga ngoku, kodwa iDisney ikhuthaze umphathi ukuba shiya kude Ayinakuqhekeka 'Yimixholo yencwadi ehlekisayo Isicwangciso sayo sentengiso. Eyona nto iphambili kumdlalo bhanyabhanya yindlela nje engaphambi kwegophe uShyamalan awayekulo mkhwa wokwenza imoviem ethile.
Ukusukela Ayinakuqhekeka , UShimamalan unezinto ezithile ( Iimpawu , Ilali ) kunye nolunye ulusu olungenantsingiselo ( Eyenzekayo , I-Airbender yokugqibela , Emveni komhlaba , UMtyholi , Inenekazi eManzini -OK, bekukho uninzi oluninzi kakhulu) ngaphambi kokubuyela kwiziseko ezinezinto ezivuyisayo zohlahlo-lwabiwo mali olunezinto ezilula. Eyokuqala, Utyelelo ukusuka ngo-2015, wabona abantwana ababini bedibana noomakhulu nootatomkhulu wabo okokuqala-emva koko akuzange kuthathe xesha lide ukuba baqonde ukuba into ikho ngokwenene kumakhulu notatomkhulu. ( Kunjalo bekukho ukujijwa.) Okwesibini, ngo-2016 Umehlulelwano , wabona uJames McAvoy njengendoda ekhathazekileyo egqithisileyo (kwaye ezinokubangela ingxaki Ityala lokungaziphathi kakuhle lokuqweqwedisa kunye nokuvalela amantombazana amathathu akwishumi elivisayo ukuba ondle kwabona bantu bangabona bantu bangendawo, Isilwanyana. Kodwa ekupheleni kwe Umehlulelwano , sabona abanye bendawo abachaphazelekayo kwindawo yokutyela bexoxa ngeendaba zokubaleka komlingiswa kaMcAvoy xa uBruce Willis, ephinda edlala uDavid Dunn Ayinakuqhekeka , kwavela ukunceda umfazi ukuba akhumbule igama lendoda ekwisitulo esinamavili ngubani wenza uhlaselo lwabanqolobi oluninzi Iminyaka eli-15 ngaphambili. Kwaye kanjalo, uShimamalan uyityhilile loo nto Umehlulelwano , eneneni wayenze enye indlela yokutsiba Ayinakuqhekeka . (Oku, ngokuqinisekileyo, yayingu kakhulu ukujija.)
Kuthathe phantse iminyaka engama-20, kodwa ngolwesiHlanu, uShyamalan ekugqibeleni wajikeleza itrogogy yakhe yekamva Iglasi , ebeka uDavid Dunn (uWillis), uKevin Wendell Crumb (McAvoy), noElijah Price (uSamuel L. Jackson) kunye kwigumbi labagula ngengqondo kwaye kufuneka bacinge ukuba ukhona na kubo ngokwenene unamandla amakhulu. Iglasi , njengalo naluphi na ufakelo lokugqibela lwe-trilogy kufuneka, aziswe ngeefilimu ezandulelayo, kwaye aqhubeke nemisonto ebalisayo abayenzileyo-ngelixa esandisa ububanzi bendawo yonke ye-cinema ukubonisa indlela abambalwa ngayo amaqhawe nabaphangi eFiladelfiya ilizwe leqhawe. Ukuba unomdla wokuba zonke ezi bhanyabhanya zidibana njani, khange uzibone iifilimu zangaphambili, okanye awuzange uzibambe Ayinakuqhekeka okanye Umehlulelwano ngexeshana, nasi isikhokelo sendlela Iglasi Ubopha le trilogy eyodwa kunye. Abaphangi abakhulu-kunye nokusayinwa kwe-Shyamalan! - ngezantsi.
Umnyhadala osisiseko we-trilogy ka-Shyamalan loliwe wase-Eastrail 177 owenzakalisa aze abulale bonke abakhweli bawo ekuqaleni Ayinakuqhekeka Wonke umntu, ngaphandle kukaDavide. UDavid akananto ayikrwemrayo kuye emva kwesehlo sentlekele, esi sesokuqala kwezininzi iingcebiso- enkosi ngokukhalipha okukrelekrele kukaElijah Price nonyana kaDavid, uJoseph (uSpencer Treat Clark) - ukuze abe namandla amakhulu. Ewe, ukutyhilwa okukhulu kwe Ayinakuqhekeka Kukuba ingozi yase-Eastrail 177 yayingeyongxaki eyintlekele: U-Elijah wayeququzelele uhlaselo lwabanqolobi, kubandakanya nokuwa koololiwe, ngeenjongo zokungqina umbono wakhe wokuba abantu abanamandla amakhulu bahlala phakathi kwethu. U-Eliya wayenyanisile ekugqibeleni, nangona oko kwakuxhomisa amehlo.
Kodwa isehlo sase-Eastrail 177 ayisiyiyo nje into ebangela ukuba uDavid abe ligorha kwaye uEliya utyhilwe njengongqondongqondo wolwaphulo-mthetho: kanjalo ubuncinci uxanduva lokutshintsha kukaKevin abe yiHorde (igama elinikwe bonke abantu abangama-24 abo bahlala kuye). Enye yezona zinto ziphambili kubomi bukaKevin kukuba utata wakhe wamshiya ngesiquphe ngenye imini, wamshiya ekhaya nomama ohluphayo. Nangona kunjalo, kwi Iglasi , Sifumanisa ukuba utata kaKevin wayengomnye wamaxhoba amaninzi e-Eastrail 177, kunye no-Shyamalan bade bahamba bade baveze ukuba wayekwisithuthi esinye sabakhweli njengo-David.
Ngaba kulula ngakumbi? Ngokuqinisekileyo, kodwa uShimamalan uthanda i-twist enhle-kwaye le nto ibonisa inkolelo ye-trilogy yokuba okungaqhelekanga kunokufumaneka naphi na, nakubani na. I-Eastrail 177 yengozi eyothusayo, ukanti enye ichaphazele amakhulu, mhlawumbi amawaka, abantu kwindawo enkulu yedolophu yasePhiladelphia. Umhlaba unabantu abangaphezulu kwe-7 yezigidigidi, kwaye ngesiganeko esinye (ngokuthelekisa okuncinci), abantu abathathu abahlukeneyo abanamandla bayilwa. (Ewe, i-trilogy posits-kunye Iglasi konke kodwa kuyaqinisekisa-ukuba amandla ka-Eliya bubukrelekrele kwinqanaba elilandelayo, kwaye ethathela ingqalelo yonke into ayenzayo ngoburharha, ehlola.) Ngesi siganeko sinye, Iglasi icebisa ukuba kwihlabathi layo, abantu abanjengoDavid balinde ukufunyanwa.
Ngokobuchwephesha, lo mthengisi weziyobisi uhlelweyo-ngubani, uqagela ukuba yintoni, edlalwa nguM. Night Shyamalan ngokwakhe-kuphela komlinganiswa ngaphandle kukaDavid Dunn ukubonakala kuzo zontathu iifilimu. Akukho nto iyabhikica kule-ngaphandle kokuqaphela ukuba uM. Night uyathanda ukufumana iHitchcock yakhe- kodwa isabalulekile njengonxibelelwano, ndiyaqikelela. (Qaphela: Umlinganiswa wahlelwa njengoJai / uMthandi weHooter on Umehlulelwano ’S IMDb iphepha, ngelixa yena nje umthengisi iziyobisi Stadium Ayinakuqhekeka kwaye uncredited kwi Iglasi , oko kuthetha ngokucacileyo ukuba wayeka ukungathandi iiHooter ukuya ngokwenene ukuthanda iiHooter, ukubuyela ngokungathandi iiHooter.)
Njani ukuba umothuko wenza ubuNgcali obusondeleyo
Ngaphaya kukaDavid, uEliya, noKevin banamandla nje amakhulu, iigos ezitshintshileyo abacinga ukuba zenziwe ngenxa yengozi eyabenza bakhula. KuKevin, sifunda, ubuntu obuninzi obubonakaliswe emva kokuba utata wakhe engazange eze ekhaya kwaye wayephantsi kukaziphatha kakubi kukanina-I-Horde yayiyindlela yokhuselo egqithileyo. Nokuba iRhamncwa, kwindawo yalo ejijekileyo, lizijonga njengomkhuseli obulalayo kaKevin. (Phakathi kwezinye izinto, i-Beast inokumelana nokudubula, nokuba abanye abantu abanakho xa bethatha ulawulo lomzimba wakhe.)
Ngeli xesha, uElijah unesifo esibuhlungu samathambo; uthatha i-alter ego Mnu.Glass kuba abantwana abamngcungcuthekisayo ekukhuleni bamnike eli gama lesidlaliso, ke ngoko wathatha into ethile efuna ukuhlekisa ngaye kwaye wayenza eyona nto iphambili kuye. Kwaye uDavid, esindile kwisiganeko esibuhlungu se-echibi njengomntwana apho waziva engenakunceda ngokupheleleyo (uthatha amanzi njenge-kryptonite), wayehlala evakalelwa ukukhusela abantu, nto leyo ichaza isizathu sokuba asebenze ngokukhuselekileyo kuninzi lobomi bakhe.
Indlela le superhero personae eziphakamise ngayo iimpendulo kwiziganeko ezichaziweyo Iglasi kungekuphela ngezenzo zikaDavid, uEliya, noKevin, kodwa ngendlela ezoxinzelelo zabo ezichaphazela ubomi babantu abasondeleyo kubo. KuEliya, loo mntu ngumama wakhe (edlalwa nguCharlayne Woodard); kuDavid, ngunyana wakhe uJoseph, ngakumbi kuba umfazi wakhe u-Audrey (edlalwa nguRobin Wright in Ayinakuqhekeka uswelekile; kunye noKevin, nguCasey (Anya Taylor-Joy), kuphela kwentombazana eyasindayo ekuhlaselweni sisilwanyana ngaphakathi Umehlulelwano kuba naye, yayilixhoba lokuxhatshazwa . Aba bantu bathathu ngabo kuphela abanokuqonda okungaphakathi kuthi kutheni aba bantu bekhethe ukuba bangobani abasemva kweenguqu ze-ego-kwabanye - ziluhlobo nje lwee-caricature ezibanzi onokuzibona kwincwadi yamahlaya.
Ekupheleni Iglasi , kuNkskz. Price, uJoseph, noCasey ukuba bahloniphe ilifa likaDavid, uEliya, kunye noKevin kwaye babelane ngobuchule babo nomhlaba wonke ukubonisa ukuba okungaqhelekanga kunokufumaneka phakathi kwethu. Ngokwenza njalo, ifilimu ixhasa indlela eqhutywa ngabalinganiswa ebonisa amaqhawe kunye nabahlali, endaweni yokuqhushumisa ongakubona kwezinye iifranchise ezinkulu, njenge-MCU, ebisoloko isokola ukwenza ukunyanzeliswa kweempawu ezingaphaya kokuma okunje UErik Killmonger .
IPhiladelphia yidolophu yakuloShyamalan, yiyo loo nto ingamangalisi into yokuba enze isixeko sibe yindawo ephambili Ayinakuqhekeka trilogy. Eyona nto iphikisayo ngokwenza ibali elincinci le-superhero xa kuthelekiswa neyunivesithi enkulu eyenziwe yi-MCU kunye neDCEU, nangona kunjalo, yinto yokuba ichaza abantu abambalwa abanamandla amakhulu. nje Kwenzekile ukuhlangana kufutshane UPaddy's Pub . Lo ayingomthunzi kaPhilly, umkhethe wonxweme, okanye nantoni na enjalo-injalo kanye Ayinakuqhekeka Ubungqina bokuba kwihlabathi elihluthwe ngamaqhawe, bonke bavela ePhiladelphia. I-MCU, ngokuchaseneyo, ibonisa amaqhawe kwihlabathi liphela-nakwigalaksi. Yeyona nto i-pro-Philly eyake yenzeka, ngaphandle kwayo yonke into eyakha yaveliswa Umkhombe .
Kodwa iinjongo zikaShimamalan zenziwa zacaca ngokuphela Iglasi . Abantu abanamandla amakhulu akuyona into ekhethekileyo ye-Philly-lonke ihlabathi liye lajongana nokulawulwa kwabantu okukhulu. Kwakhona, uEliya wayenyanisile kwinkolelo yakhe yokuba abantu abangaphezu kwabantu bahlala phakathi kwethu. Into awayengayilindelanga yayikukuba kukho umbutho weenkulungwane ezidlulileyo onjongo yawo ephambili kukugcina amaqhawe angaphandle kwindawo ebonakalayo.
Ekupheleni Iglasi , Ifilimu ibonisa ukuba le ntlangano engaqondakaliyo iqinisekisa ukuba abantu abanezakhono ezifana noKevin, uDavid, noEliya ababi yinxalenye yoluntu. Kukho isizathu abantu kwihlabathi Ayinakuqhekeka abayeki ukukholelwa umntu ofana noDavid onamandla: Lo mbutho ulawule olu lwazi kakuhle kangangeenkulungwane kangangokuba ukubakho kwamagorha amakhulu akukenzeki. Yinto yelaphu leentsomi. Nangona kunjalo, Iglasi iphela ngokuxelela ukuba oku kuzokutshintsha, kwaye abanye abantu abanezakhono ezikhethekileyo njengoDavid baya kungena kwindawo ebonakalayo kwizixeko zabo njengamaqhawe-okanye abenzi bobubi. Njengoko uEliya esitsho, mhlawumbi ebonisa ukuba uShimamalan angafuna ukwenza ezona bhanyabhanya zibalaseleyo kwindalo iphela: Yinto Imvelaphi yebali .
Amabali amathathu emvelaphi, ukuba achane, aphuhliswe ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini ngomnye wabaphengululi baseHollywood. I-Shyamalan ’ Ayinakuqhekeka I-trilogy ayigqibekanga-uchitha ixesha elininzi kakhulu kuyo Iglasi Ukucacisa ngaphezulu umbono wezinto eziphambili kubaphulaphuli, ngokungathi asikaze sikubone ukulungiswa kwencwadi yamahlaya ngaphambili. Kodwa umenzi wefilimu wakhulelwa into ephezulu kakhulu engafaniyo nenye into, kwaye njengo Mnumzana uGlass, wayelinyathelo elothusayo phambi kwakhe wonke umntu ekuziseni umbono ogcweleyo.
ipilisi ebomvu ipilisi eblue morpheus
ikhefu lokujonga kwakhona kumdlalo bhanyabhanya
funda ikhowudi yengxabano
U-kendrick lamar damn ngasemva
dontari poe td kudlula
ujerry krause michael jordan